ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူမျာကြောင့် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ပျ့နှံ့မှုအား ထိန်းချုပ်ရန် lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းကို တိုးမြှင့်မည်မဟုတ်ကြောင်း အိန္ဒိယအစိုးရ ပြောကြား ~ Myanmar Online News
ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒရာမိုဒီ မှ Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ပျ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၁.၃ ဘီလီယံအား ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ နေအိမ်အတွင်း၌သာ နေထိုင်ရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
Lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းကို ငြင်းဆန်နေသည့် နေ့စားအလုပ်သမား ရာပေါင်းများစွာသည် ဒေလီနှင့်မွန်ဘိုင်းကဲ့သို့ မြို့ကြီးများမှ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ မိသားစုများရှိရာ ကျေးလက်ဒေသသို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများမှ ၎င်းတို့တွင် အစားအစာနှင့် ပိုက်ဆံမရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး Rajiv Gauba မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေဖြင့် lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းက ိုသုံးပတ်ကျော်လွန်သည်အထိ တိုးချဲ့မည်မဟုတ်ကြောင်း Reuters သတင်းဌာနအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၁,၀၇၁ ဦးရှိပြီး ၂၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တနင်္လာနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် ကူးစက်ခံရသည့် အရေအတွက်နည်းသော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစနစ် အားနည်းနေမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် ကူးစက်ရောဂါမှ ကင်းဝေးနိုင်ရန် ရက်သတ္တပတ် များစွာ ကြာမြင့်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးအရာရှိများမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် အိမ်နီးချင်းနီပေါနိုင်ငံအနေဖြင့် lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းကို အင်္ဂါနေ့မှစတင်၍ နောက်ထပ်တစ်ပတ်တိုးချဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၅ ဦးသာရှိပြီး သေဆုံးသူမရှိသော်လည်း ခရီးသွားလာမှုမှတဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန် လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် K.P.Sharma Oli ၏ လက်ထောက်ဖြစ်သူ Surya Thapa မှ“Lockdown ပြလုပ်ထားခြင်းအား တိုးချဲ့မှုပြုလုပ်လျင် ပြည်သူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ပိုမိုများပြားလာနိုင်ကြောင်း ” ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နေရပ်ပြန်နေကြသည့် အလုပ်သမားရာပေါင်းများစွာမှတဆင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသို့ Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့နှံသွားမည်ကို အဓိကစိုးရိမ်ပူပန် နေရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးစင်တာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Dr S.K. Singh မှ “ရေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြောင်းရေ့ခြင်းကဲ့သို့ စိန်ခေါမှုအသစ်များ နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အစိုးရသည် ပြည်နယ်များရှိ အာဏာပိုင်များအား ရေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ရွှေ့ပြောင်းနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်၊ အဝေပြေးလမ်းမများပေါတွင် အမိုးအကာများတည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် lockdown ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးချန်ထိ ၎င်းတို့အား အစားအစာနှင့်ရေများထောက်ပံ့ပေးရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရ၏ အချက်အလက်များအရ တောင်အာရှရှိ နိုင်ငံ ၈ နိုင်ငံ၌ Coronavirus ကူးစက်ပျံ့နှံံ့မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များမှာ
- ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ခံရမှုကြာင့် သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၁,၅၂၆ ဦးရှိပါသည်။
- အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Coronavirus ကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၉ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၁,၀၇၁ ဦးရှိပါသည်။
- သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင် Coronavirus ကြောင့်သေဆုံးသူ ၁ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၀ ဦးရှိပါသည်။
- အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၈ ဦးရှိပါသည်။
- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ကြောင့် သေဆုံးသူ ၅ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၄၈ ဦးရှိပါသည်။
- ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူ ၁,၅၂၆ ဦးရှိပါသည်။
- မော်လ်ဒိုက်တွင် Coronavirus ကူးစက်ခံရသူ ၂၈ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ မရှိပါ။
- နီပေါ တွင် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၅ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူမရှိပါ။
- ဘူတန်နိုင်ငံတွင် Coronavirus ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူ ၄ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ မရှိပါ။
သို့သော် အိမ်နီးချင်းနီပေါနိုင်ငံအေနဖြင့် lockdown ပြုလုပ်ထားခြင်းကို အင်္ဂါနေ့မှစတင်၍ နောက်ထပ်တစ်ပတ်တိုးချဲ့မည်ြဖစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ေရးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေးစင်တာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Dr S.K. Singh မှ “ရေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအား တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြောင်းရေ့ခြင်းကဲ့သို့ စိန်ခေါမှုအသစ်များ နေစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း” ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အစိုးရသည် ပြည်နယ်များရှိ အာဏာပိုင်များအား ရေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ရွှေ့ပြောင်းနေခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်၊ အဝေပြေးလမ်းမများပေါတွင် အမိုးအကာများတည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် lockdown ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးချန်ထိ ၎င်းတို့အား အစားအစာနှင့်ရေများထောက်ပံ့ပေးရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။